Xildhibaan ka tirsan Koofur Galbeed oo lagu dilay Baydhabo iyo Rabshado wali ka socda magaalada
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in la dilay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Koofur Galbeed, iyadoo xiisada ka taagan magaalada ay cirka isku shareertay, kaddib markii ay ka dhaceen iska hor imaadyo.
Aadan Saransoor “Shariif Xasan wuxuu rabaa in Madaxtooyadii uu deganaa inuu doorashada ku qabto”
Sagal Radio Services • News Report • August 25, 2018
Howl gallo ballaaran oo ciidamada Ammaanka ka wadaan magaalada Baydhabo
Ciidamada ammaanka ayaa howl gallo ballaaran ka wada qeybo ka mid ah magaalada Baydhabo, kadib markii Khamiistii weerar lagu qaaday xarunta Madaxtooyada Maamulka Koofur Galbeed.
Maamulka K.Galbeed oo soo bandhigay Meydadka Ragii Weeraray Madaxtooyada
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa Faah-faahin ka bixiyay Weerar iskugu jira Qaraxyo iyo mid toos ah oo Al-shabaab ay Barqanimadii maanta ay ku qaadeen Madaxtooyada Koofur Galbeed.
Faah faahin horu dhac ah oo ka soo baxaya weerarkii Madaxtooyada Baydhabo iyo Shariif Xasan oo ka bad baaday
Kadib dagaal socday ku dhawaad 2 saacadood ayaa ugu dambeyntii Ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysteen inay soo afjaraan weerar qorsheysanaa oo Al-Shabaab ku qaaday maanta oo khamiis ah xarunta Madaxtooyada koonfur galbeed ee Magaalada Baydhabo.
Sheekh Xuseen Xasan Soor madaare oo la dilay xili uu kasoo baxay Masjid uu Salaad kasoo dujiyay
Kooxo Hubeesan oon wali heebtooda la garan ayaa xalay xaafada Bardaale ee Magaalada Baydhabo, waxa ay ku dileen Wadaad caan ka ahaa Magaaladaasi, dilka ayaana dhacay Xili uu Wadaadka kasoo baxay Masjid uu salaada Cisha Jameeco kusoo dujiyay.
Madaxweynaha Cusub ee Maamulka Koonfur Galbeed oo u duulay Magaalada Copenhagen xili saacado ka hor la doortay
War goor dhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in Madaxweynaha Cusub ee Maamulka Saddexda Gobol ee Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan uu goordhow ka dhoofay Garoonka duulimaadka Baydhaba isagoona u ambabaxay Magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
Sawiro:Xuska RRA iyo Bannaanabax looga horjeedo dowladda oo Baydhabo ka dhacay
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa maanta lagu xusay sannad-guuradii 16-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii jabhaddii RRA, iyadoo xuskan lagu qabtay fagaaraha Caalin.
Dowladda Soomaaliya oo diyaarad u dirtay Baydhabo, si ay u soo qaado dhaawacyada qaraxii shalay
Sagal Radio Services • News Report • May 13, 2014
Iyadoo daawo la'aan laga soo sheegayo isbitaalka magaalada Baydhabo ayaa dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay diyaarad u dirtay, si ay u soo qaadaan dhaawcayadii ka dhashya qaraxii ismiidaaminta ee shalay ka dhacay bartamaha Baydhabo.
Madaxweynaha Iyo Guddoomiyaha Baarlamanka Oo Beydhabo Kulamo Kula Leh Odayaasha Dhaqanka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha Baarlamanka oo ku sugan magaalada Beydhabo ayaa kulamo gooni gooni ah la leh odayaasha iyo waxgaradka ku sugan magaaladaasi.
Sheekh Aadan Madoobe oo Shariif Xasan ku eedeeyay inuu Baydhabo ka dejiyay diyaarad hub sharcidaro ah waday
Shariif Xasan Sheekh Aadan Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya iminkana ah Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu Magaalada Baydhabo ka dejiyay diyaarad siday hub sharcidaro ah.
War Deg Deg Ah Shariif Xasan oo loo diiday in uu galo Baydhabo iyo Dibad bax looga soo horjeedo oo hada socda
Wararka aan ka heleyno Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay ayaa sheegaya in Gudoomiyihii hore Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Xildhibaano kale oo la socday loo diiday in ay gudaha u galaan Magaalada Baydhabo .
Dagaalo culus oo xalay ka dhacay magaalada Baydhabo iyo Al-Shabaab oo gudaha u galay
Kooxda Al-shabaab ayaa habeenkii xalay ahaa weerar xooggan oo saacado socday ku qaadday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Goobaha la weeraray ayaa waxaa ka mid ahaa: saldhigga weyn ee booliiska Baydhabo iyo halka uu daggan yahay xildhibaan Sheekh Aadan Madoobe oo ka mid tiro xildhibaanno ah oo dhawaan soo gaaray Baydhabo. Sidoo kale, goobaha dagaalka lala beegsaday waxaa la mid ahaa saldhigga ciidamada madaniga ah ee magaalada, iyadoo dhinacyadu ay hubka fudud iyo midka culus isku adeegsadeen.
Magaalada Baydhabo ayaa beryahan waxaa ka jira howlgallo lagu qabqabanayo dhallinyarada, iyadoo la sheegayo in magaalada ay soo galeen xoogag taageersan Al-shabaab kuwaasoo doonaya inay qaraxyo ka sameeyaan gudaha magaalada.
Odayaal iyo wax garad ka soo jeeda deegaanada Gobalka Bay oo sababa cabsi owgeed magan galyo ahaan u galay Saldhig ay AMISOM ku leedahay halkaasi.
Wararka laga helaayo magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in Nabadoonada Beelaha Digil iyo Mirifle in ay saldhigyada ay Ciidamada AMISOM u galay magan-galyo ahaan, iyagoo ka baqdin qaba in la dilo.